Baldr Baby Pink Girl's Room 8282chọ Mma 8282 Blackout Curtain, China Baldr Baby Pink Girl's Room XNUMXchọ Mma XNUMX Blackout Curtain Manufacturers, Suppliers, Factory - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Baldr Baby Pink Girl's Room cochọ Mma 8282 Blackout Curtain
EZI BLACKOUT Ikike & Mma obibi - A na-ekpuchi ákwà ngebichi maka agba dị iche iche ma ọ bụ ọtụtụ agba agba. Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ agba na nkwonkwo ntụpọ kpamkpam. Uwe ahụ n'onwe ya bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu n'ụwa niile. Na-akwado teknụzụ nke nwere eriri atọ na ultraviolet atọ, na-enwe ike belata ìhè anyanwụ na ụzarị UV (agba ọchịchịrị na-arụ ọrụ ka mma), yana mkpọtụ, ime ụlọ na-edozi ọnọdụ site na-egbochi okpomọkụ okpomọkụ na oge oyi, na-echebe nzuzo
N'AGELỌ N'&LỌ N'&LỌ AH & & OLỌ ARKLỌ - outkwà mgbochi ákwà mgbochi zuru oke maka ime ụlọ / ime ụlọ / ụlọ ụmụaka dịka ákwà mgbochi na-arụ ọrụ. E wezụga nke ahụ, otu ihe ahụ n'akụkụ na agba siri ike na-agbakwunye ụlọ karịa. 100% Polyester, nke ekike ọhụrụ nke okpukpu atọ; ọ dịghị akwa akwụkwọ siri ike; na-eji windo mara mma rụọ windo nwere drape mara mma.
Adị na ọkpụrụkpụ akwa
IJU OJU ỌJỌỌ
UBUA NA UBA
Igwe akụrụngwa, atgwè na ọnọdụ okpomọkụ dị ala. Emere na ụlọ ọrụ OEKO-TEX Standard 100, na-achọpụta na akwa akwa na-ezute oke nchekwa na ụkpụrụ gburugburu ebe obibi.
Anyị Triple Weave Blackout Technology fabric bụ ihe ọkụ na-asọba na ngwongwo zoro ezo pụrụ iche nke na-egbochi ìhè maka ụra ụra. Enweghị mkpuchi ma ọ bụ formaldehyde na ákwà ngebichi anyị. Enweghị mmerụ ahụ ike, ọkachasị maka nwa ọhụrụ. Were nwayọ zụta ha.